WAA MAXAY ERGADA DOORASHADA (Electoral College) EE MAR LABAAD DOORATA MADAXWEYNAHA MARAYKANKA | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii WAA MAXAY ERGADA DOORASHADA (Electoral College) EE MAR LABAAD DOORATA MADAXWEYNAHA MARAYKANKA
WAA MAXAY ERGADA DOORASHADA (Electoral College) EE MAR LABAAD DOORATA MADAXWEYNAHA MARAYKANKA
Waan hubaa inaad og tihiin intiina waxbaratay ama xataa intiinna warbaahinta caalamka la socotaa in doorashada madaxweynaha ee dalka Maraykanku ka duwan tahay dalal badan oo caalamka ah waayo mar kasta oo ay dhacayso doorasho “madaxweyne & m/kuxigeen” waxan maqalnaa dadkii Maraykanka ayaa madaxweyne dooranata haddana waxan mar mar maqalnaa “ELECTORAL COLLEGE”-kii baa madaxweyne doortay ama labada murashax X baa ku horreeyay/horreysay codka dadweynaha (popular vote) laakin murashax Y ayaa guuleystay maadaama uu helay tirada ugu badan xagga ‘electoral college”-ka.
Waa yaab ee labadu maxay kala yihiin? Garanay codka daweynaha (popular vote) ee muxuu yahay ELECTROL COLLEGE VOTE?
Haddaan runta idiin sheego madaxweynayaasha USA ma doortaan dadweynuhu ee waxa doorta gole ka kooban 538 qof oo ka kala socda gobollada kala duwan ee Maraykanka.
Waa run dadweynuhu way codeeyaan oo weliba waxay u codeeyaan madaxweynaha ay doonayaal laakin marka dhab ahaan loo hadlayo, ee dastuurka la raacayo, codka dadweynuhu ma aha kuwa dooranaya madaxweynaha ee waxay dooranayaan ciddii madaxweynaha dooran lahayd oo ah golaha loo yaqaan “Electoral College” kuwaas oo marka ay soo baxaan iyaguna sii doorta madaxweynaha in kasta oo aynaan dareemin doorashadaas danbe waayo waxa hoos-hoosey u dhaca.
Markaa halkaas waxad ka fahmaysaa in cidda rasmiga ah ee aayaha dalka gacanta ku haysaa ay tahay golahaas dooranaya madaxweynaha ee aanay ahayn dadweynaha iyo dumarka & carruurta qaylinaya.
Isla markaana “Electoral College” maaha gole kale oo gaar ah ee waa xubnaha labada gole oo la isku daray oo tiradoodu tahay 538.
Haddaba waa waa su’aal da’ weyne waa maxay “electoral college”?
Haddaan kuu soo koobo “Electoral College” wax kale maaha ee waa gole la mid ah
“أهل الحل و العقد”
-gii doortay 4-tii Khulafaa’u raashidiin (RC) laakin waddaadada “xerowga” ahi arrintaa ma fahmi karayaan waayo waa khashiimiin isu haysta niman diin yaqaan diinna ma yaqaanniin waa na kuwa ummadda la hadhay ee dadka diinta sida qaldan ugu fasiraya dabeedna ka hor keenaya dowladdooda iyo madaxdooda iyagoo ugu muujinaya in diintii Rabbi la khilaafayo haddii doorasho la qabto.
Arrimo yaryar oo farsamo waa ku kala duwanaan karaan laakin, mabda’ ahaan, goluhu waa isla golihii asxaabtii Nebi Muxammad (SCW) aasaaseen “oo laakin Aakhir-Zaman jooga” gaalna walwalaaqayo.
Markaa doorasho waxa dunida ugu horreeyay muslimiinta taasoo oo micnaheedu yahay in dadku madaxdooda doortaan halkii uu ka xukumi lahaa boqor oo ah nin mansabka dhaxal ku helay (sidii uu dadka kale ka dhalasho fiican yahay ama kursiga ka xigo) iyo ama ka xukumi lahaa keligii-taliye (oo ah nin talada xoog ku haysta sidii uu dadka oo dhan ka xoog badan yahay).
Labada midna diintu ma oggola; dadku waa inay madaxdooda doortaan. Sidaas buu inna farayaa dhaqankii nebigeenna (SCW) iyo asxaabtiisii.
Waa qalad iyo khashiinnimo in lagu wareero arrimo yaryar oo farsamo oo ay ka mid yihiin sidee wax loo doorannayaa (how), yaa wax dooranaya (who), yaa la dooranayaa (whom), goor maa la dooranayaa (when), iwm.
Arrimahaas yaryar waa inaan culimadu dadka ku wareerinnin ee dadku madaxdooda doortaan waayo waa arrimo farsamo oo qolo waliba ka dhigan karto sidii diintooda & dhaqankooda waafaqaysa laakin mabda’iyan waa in culimadu fahamto in doorashadu xalaal tahay oo weliba salafkii ummaddani jideeyay.
Waa in la fogeeyaa boqor & keligii-taliye oo dadku doortaan madaxdooda.
Waa na inaan ogaannaa in keligii-taliye iyo boqor isku mid yihiin si ahaan waayo boqorku waa keligii-taliye “sii kibray” oo dadkii ku dul kaajay illaa uu yidhi dalka & dadka ba anigaa leh! Markaa boqor kastaa waa keligii-taliye laakin keligii-taliye kastaa boqor maaha.
Doorashadu waa dhaqankii hore ee salafkii ummaddan laakin wadaadada xerowyaalka ma fahmi karayaan waayo waxa iskaga qaldan labada eray ee “doorasho” iyo “dimuqraadiyad”.
Sidaas u la socda Soomaaliyey oo doorashooyinka ha diidina laakin iska saxa oo dumar & carruur “ha ku halleynina” mustaqbalka dalka.
Waa na iska qabataan labo qolo oo aydaan waxba ka dhegeysan: cilmaani iyo wadaad xerow ah; haddii cilmaani maqashaan diin la’aan baa idinku dhacaysa dabeed cadaab baa idin leh Aakhiro, Alle na qaddaree; haddii wadaad khashiin ah raacdaanna dowlad la’aan baa idin leh Ifka dabeedna waa dulli iyo daranyo joogto ah oo weliba khatar ugu jirtaan in Aakhirona seegtaan illeyn dad aan dowlad lahayn diin ma difaacan karaane.
Waa inaad doorataan madax ay arrimahoodu isu miisaaman yihiin; rag If & Aakhiro ba wax idinka celin kara.
Raygal, 5 Nov 2020.
Previous articleGudoomiyaha Aqalka sare oo ganafka ku dguftay Gudigii uu Ra iisal wasare Rooble magacaabay ee dhanka Doorashada
Next articleBanbaxa Golaha Wasiirrada Xukumadda J.F.S 3 – 5 Nofeember 2020
□Shacabka Tigrey iyo shacabka Somaliland □jabhaddii TPLF iyo Jabhadii SNM □Magaaladda Muqdisho & Magaaladda Adis □Magaalada Haragysa & Magaalada Makelle Gobolka Maxaa kasocda Maxaase dhicidoona Magaalada adis ababa ayaa...